musha > Travel Europe > 5 Day Trips From Milan By Train
Zvakaoma kusarudza chete 5 Easy Day trip From Milan By Train kuti mugove nemi. Mari yefashoni yeItari inopenya nesarudzo dzevashanyi vanoshanya. Kwete chete ari izvozvo akazara fashoni, asi ane incredible kare, akitekicha, uye nzvimbo dzokuona dzakanaka kunyora kumba nezve.
Our rokutanga Easy Day Trip From kuMilan kuti Italy rechitatu pakukura nyanza nokuti zuva nechitima, uye vanonzwa kwoumbozha rwendo kumativi mvura yaro. Chii nani nzira kuwana dzinokatyamadza yomumakomo girl nouta muchikepe, uyewo kuwana mukana atore sveverera Peek panguva yakanaka waterside ehupfumi pamusoro Mahombekombe ayo.
The nechepakati nharaunda Lake Como ndiyo akashanyira chikamu mudziva, uye kunyange zvazvo kumaodzanyemba nzvimbo mudziva vane nzvimbo yavo kufarira izvi vanowanzova zvishoma chaizvo: ehe saizvozvo, ndine zvose huru zvinokwezva zvikuru pedyo pamwe chete zvakare dzinokodzera vashanyi dzisina nguva.
Ona kuti dzimwe nguva maguta vari pedyo pamwe chete, asi akaparadzaniswa parutivi rwegungwa! Hapana dambudziko, pane nguva ferries mhiri kwegungwa saka vaifamba kumativi zviri nyore (motokari ferries zvisinganyanyi kakawanda uye kushanda kubva vashoma chikepe zviteshi pane mutakurwi ferries).
2. St. Moritz, Siwizarendi
Unogona kushamisika kudzidza kuti Switzerland rinongova rwendo zuva kubva Italy guta. Kusvetukira ari Bernina Express kubva Tirano uye muchava ikoko maviri chete uye maawa nehafu.
Parwendo rwacho zviripo: ichi ndicho steepest njanji rwendo munyika, akwira kubva 429 metres kusvikira pamusoro 1800 mumakomo eSwitzerland. Nzvimbo dzinotyisa dzemakomo dzinoonekwa kubva pahwindo rechitima zvinoreva kuti haudi kusiya chitima.
Uchava anoguma muguta Swiss pamusoro St. Moritz, mumwe vakawanda plesieroorde gomo Switzerland wakakurumbira. Apa ndipo apo vapfumi nevakakurumbira vanoshandisa mazororo avo kana kuve neyake chalet.
St. Moritz haasi hwokufananidzira yevedza YOMUMAKOMO mutaundi. Tinofunga kuti dekara ndiyo tsanangudzo kukodzera pane runako. Nzvimbo dzakapoteredza ndiyo yakanaka kunyange uye pamwe chete inokosha kuitika muguta, kuzororo inoshamisa iri zvachose kodzero.
St. Moritz anoita chawo akakwana kuongorora rwezasi Canton pakati Graubunden. Hazvina pakadarowo chakanaka zuva achienda dzimwe Switzerland, sezvo zvaizoitika Zvaringana nguva kufamba. Ndizvo, zvisinei, mumwe pamusoro yedu 5 Day Trips From Milan By Train kunyange! Kunze Nightlife muguta, huru zvinhu pano vari panze. Kana uchida musango, cu, kana mitambo chando, unogona ufare kwevhiki iyi dzinokatyamadza munharaunda.
Kushanyira Bergamo rinonyanya kubatanidzwa rwendo Lake Chemhondoro, asi zviri zviripo nzvimbo yayo pamusoro yedu 5 Day Trips From Milan By Train pryslys!
With masvingo kare ndichisveerera kuti makiromita mashanu kumukomberedza guta rekare, uye mafashafasha Ages mapurani kutarisa, hune chinokosha chivande kuti vashanyi vanoda nzvimbo runako kupedza zuva.
Kuchovha kuti funicular kubva pasi kusvikira kumusoro muguta, uye tora Ngatitarise Bergamo kuti zvinokosha sezvivako, dzakadai St. Maria Maggiore Cathedral uye Colleoni Chapel.
Last, asi kwete muduku, usakanganwa kutora chinguva kuti unzwisise zvakapoteredzwa neBergamo, nezvikomo Munotatamura kwemakiromita, nzira yose kusvika kure Lake Chemhondoro.
Milan kuna Bergamo Zvitima
Mantua kuna Bergamo Zvitima
Sei Bergamo Zvitima
Anorovedza Cremona kuna Bergamo
The Franciacorta Nharaunda inopa zvimwe zvinoshamisa, waini inohwina mubairo iwe kuti utore, pakati nakisisa Italian girl.
Wana mukana kundosangana waini vaburitsi pachavo! Bvunza mibvunzo pamusoro nedanho winemaking, uye chii chinoita yavo chaiyo muchiso saka richinaka.
Nzvimbo Franciacorta DOCG Kunoumbwa pamusoro 3,000 mahekita emiti yemizambiringa inovhara imwe nzvimbo inoshamisa inotenderera iri kumaodzanyemba kweLake Iseo muItari Lombardy dunhu.. Izvi mukati nekusvipirwa kure vakawanda zvimwe yakakurumbira Italian kumatunhu waini, akadai Piedmont kumavirira uye Conegliano Valdobbiadene (musha nakisa shoma Prosecco) kumabvazuva.
Ichi chikuru nzvimbo inoita Franciacorta kuenda wakakwana nokuda kudanana uchapukunyuka kana yakakodzerwa tsime rwendo waini, chete ane maawa okugumburisa kubva Milan, inowanikwa uye yakanaka zvakaenzana.
The Boutique wineries pamusoro Franciacorta zvechokwadi chipo chimwe chinhu chinokosha, asi kunotenga kuri wo! The Franciacorta Magadzirirwo nzira yokubudisa ane zvakawanda bargains kupa savvy shopper, saka iva nechokwadi kuti maoko ako pamusoro nhumbi pano.
Cremona kuna Brescia Zvitima
Bergamo kuna Brescia Zvitima
Milan kuna Brescia Zvitima
Treviglio kuna Brescia Zvitima
Pamazita Yedu 5 Day Trips From Milan By Train zvaisazova kwakakwana pasina kusanganisira Venice! Chii chingava nani pane kutora rimwe zuva rwendo kubva kuMilan kuti rimwe remaguta uchidanana vandinokoshesa chaizvo Italy raMwari, Venice? Kunyange zvakaoma aenderane yose Venice zvinofadza kupinda chete zuva rimwe, unogona zvirokwazvo edza.
Dzichidzungaira kwayo tonhorera, cobbled migwagwa. Iva kofi iri rakakurumbira Piazza San Marco. Pamwe ungatotambanudzira kukwira gondola kuburikidza nemigero yechiitiko chakakosha.
Hapana mubvunzo kuti zvakakodzera nekuona kuburikidza ikapenya the lagoon. Nakidzwa naka mapurani kunozivisa mumwe Italy vakawanda dzakakurumbira maguta nokuti vashanyi.
Kana uchine nguva, musoro mumwe Venice pedyo zvitsuwa. Murano ndiyo inozivikanwa girazi vachiridza tsika, uye zvichida kutenga trinket kutora kumba.
Akagadzirira ruzivo 5 Day Trips From Milan By Train? Musoro pamusoro kuti Save A Train ikozvino! No zvakavanzika mari, hapana dzichikunetsa!
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Easy Day trip From Milan By Train” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/day-trips-milan-train/?lang=sn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Bergamo comolake Masikati EuropeByTrain milan Train Travel chitima kufamba Mazano chave